Rosa Montero, nyere ndi National Literature Prize 2017 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carmen Guillen | | Asọmpi na Awards, Ndị edemede, Akwụkwọ, Akwụkwọ
Foto © Patricia A. Llaneza
Yesnyaahụ, Nọvemba 13, enyere ya ikike Akwụkwọ Nlekọta Akwụkwọ Mba 2017 nye onye edemede Rose Montero. Site na Akwụkwọ ndị dị ugbu a, nke mbụ, kelee onye edemede maka onyinye a kwesịrị ekwesị na anyị, ndị na-agụ akwụkwọ anyị, hapụ gị nchịkọta nke akwụkwọ 5 ya kacha mma. Ọ bụrụ n’ịgụbeghị ihe ọ bụla banyere nke ya, nke a bụ ohere gị. Họrọ otu n'ime ndị a anyị na-eweta ebe a, na anyị kwenyesiri ike na ị ga-ahụ ya n'anya, n'agbanyeghị ihe ị họọrọ.
1 «Akụkọ banyere ụmụ nwanyị» (Alfaguara, Jenụwarị 2012)
2 «Ndị hụrụ na ndị iro» (Alfaguara, Jenụwarị 2012)
3 «Akụkọ banyere eze transperent» (Alfaguara, Jenụwarị 2012)
4 "Echiche nzuzu nke agaghị ahụ gị ọzọ" (Seix Barral, 2013)
5 «Anụ anụ ahụ» (Alfaguara, 2016)
«Akụkọ banyere ụmụ nwanyị» (Alfaguara, Jenụwarị 2012)
N'okwu onye edemede n'onwe ya, «Akwụkwọ a na-achịkọta, na nsụgharị gbasaawanye, akụkọ ndụ ụmụ nwanyị m bipụtara na mgbakwunye Sunday nke El País. Amaghị m ebe m ga-esi rụọ ọrụ ndị a: ọ bụ ezie na edepụtara ha nke ọma, ha abụghị akụkọ ndụ agụmakwụkwọ ma ọ bụ edemede akwụkwọ akụkọ, kama ọ bụ ezigbo ederede, ederede onwe onye. Ha bu akuko banyere umunwanyi ndi puru iche nke m gbaliri ighota. Enwere ndị na-emesapụ aka na ndị ọjọọ dị, ndị ụjọ ma ọ bụ ndị ụjọ, ndị ọgba aghara ma ọ bụ ndị ụjọ; Ha niile bụ, ee, dị na mbụ na ụfọdụ na-eju anya n'ihi ọdịdị pụrụ iche nke ihe omimi ha. Mana echere m na, n'agbanyeghị agbanyeghị iju ha nwere ike iyi, anyị nwere ike ịmara onwe anyị na ha oge niile. Ma ọ bụ na onye ọ bụla n’ime anyị na-etinye onwe ya n’ime ndụ niile ».
"Ndị hụrụ ya n'anya na ndị iro" (Alfaguara, Jenụwarị 2012)
N'ime akwụkwọ a, anyị nwere ike ịchọta usoro nke akụkọ. Akụkọ ndị na-ezo aka na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị metụtara ebe gbara ọchịchịrị nke ihe ụtọ na ihe mgbu bụ di na nwunye ahụ: ya bụ, ha na-emekọ ihe banyere ịhụnanya na enweghị ịhụnanya, mkpa na ọhụụ nke ọzọ. Ha bu akuko nke nekwu banyere ochicho nke anu aru; site n'àgwà na obi nkoropụ; nke obi ụtọ na hel.
Akụkọ ndị a, na-agbagha mgbe niile, na-atọ ilu, juputara n'ịkpa ọchị na ịdị nro nke ịhụnanya, na-eme enyo na-atụ aro banyere mmekọrịta kacha njọ na nke miri emi, nke abyssal na incandescent n'ókèala na-ajụ mgbe niile ka a kpọọ aha.
"Akụkọ nke transperent eze" (Alfaguara, Jenụwarị 2012)
N'ime ọgba aghara nke narị afọ nke iri na abụọ, Leola, nwa agbọghọ na-eto eto nke na-eto eto, na-eyiri onye agha nwụrụ anwụ n'ọgbọ agha ma yiwe ya uwe agha ya, iji chebe onwe ya n'okpuru uwe dị egwu. Otu a ka esi amalite akụkọ na-atọ ụtọ na nke na-atọ ụtọ banyere ndụ ya, ihe omume dị adị nke na-abụghị naanị Leola kamakwa nke anyị, n'ihi na akwụkwọ akụkọ a nwere ihe ndị dị egwu na-agwa anyị maka ụwa dị ugbu a na ihe anyị niile bụ.
"Akụkọ nke Eze Pụrụ Iche" ọ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe njem na-amaghị ama Middle Ages nke ahụ na-esi ísì ma na-enwe mmetụta na anụ ahụ, ọ bụ akụkọ ifo na-ebugharị site n'ịdị ebube ya, ọ bụ otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ na-anaghị agụ, kama dị ndụ. N'ịbụ nke siri ike na nke siri ike, akwụkwọ akụkọ Rosa Montero nwere ike karịrị akarị nke akwụkwọ enyere akara ịbụ ndị ochie.
"Ndị nzuzu echiche ghara ịhụ gị ọzọ" (Seix Barral, 2013)
Mgbe Rosa Montero gụrụ akwụkwọ akụkọ magburu onwe ya Marie Curie Ọ malitere mgbe di ya nwụsịrị, nke dịkwa na njedebe nke akwụkwọ a, ọ chere na akụkọ banyere nwanyị ahụ na-adọrọ mmasị bụ onye chere oge ya ihu jupụtara na echiche na mmetụta uche.
Echiche nzuzu nke agaghị ahụ gị anya ọzọ sitere n'ọkụ nke okwu, site n'oké ifufe ahụ na-agbasi ike. N'ịgbaso ọrụ pụrụ iche Curie, Rosa Montero na-ewuli a akụkọ dị n'etiti ncheta onwe onye na ncheta onye ọ bụla, n'etiti nyocha nke oge anyị na mkparịta ụka chiri anya. Ndị a bụ ibe na-ekwu maka imeri ihe mgbu, mmekọrịta dị n'etiti nwoke na nwanyị, ịma mma nke mmekọahụ, ezigbo ọnwụ na ndụ mara mma, sayensị na amaghị ama, ikike nchekwa nke akwụkwọ na amamihe nke ndị mụtara ịnụ ụtọ ịdị adị zuru oke na gwuo egwu.
Ndụ, n'efu na nke mbụ, akwụkwọ a na-enweghị ike ịkọwapụta gụnyere foto, ncheta, ọbụbụenyi na akụkọ ọhụụ na-egosi oge ụtọ oge ochie nke ịge ntị na akụkọ ọma. Ederede ziri ezi, na-atọ ụtọ ma na-emekọ ihe ọnụ nke ga-ejide gị na peeji mbụ ya.
«Anụ anụ ahụ» (Alfaguara, 2016)
Abalị opera Soledad ọ na-agba gigolo iji soro ya gaa ngosi ka o wee nwee ike ime ka onye hụrụ ya n'anya nweere ya anyaụfụ. Ma ihe ike na ihe a na-atụghị anya ya na-eme ka ihe niile sie ike ma bụrụ mmalite nke nsogbu, mgbawa ugwu na ikekwe ihe egwu. Ọ b yearsara ọgu arọ atọ; ihe gigolo, iri atọ na abụọ.
Site na ọchị, kamakwa ọnụma na obi nkoropụ nke ndị na-enupụ isi megide mbibi nke oge, akụkọ banyere ndụ Soledad na-esonye na akụkọ nke ndị ode akwụkwọ a bụrụ ọnụ na ngosi ngosi ọ na-ahazi maka Ọbá Akwụkwọ Mba.
Anụ ahụ Ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ nwere nkwuwa okwu na ịtụnanya, nke kacha bụrụ nke kachasị na nke Rosa Montero dere.
Ọrụ a abụwo onye mmeri, n'etiti ndị ọzọ, nke Onyinye Oge Ochie, el Grinzane Cavour onyinye, el Ihe Readgụ Award maka Akwụkwọ kacha mma nke afọ na Akara Udo nke Madrid.
Ichoro otutu ihe kpatara iguru guru onye edemede a? Ọ bụrụ na synopses ndị a emeghị ka ị kwenye, anyị amaghị ihe ga-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Rosa Montero, nyere onyinye akwukwo ndi mmadu 2017
Charles Perrault: biography na akụkọ kacha mma gbasara ụmụaka
Ajụjụ ọnụ Isabel Coixet nwere maka ihe nkiri ọhụụ ya bụ "The Library" nke dabeere n'akwụkwọ ahụ Penelope Fitzgerald dere